डा. रोशन राउत मुटुको चाल गडबडी (कार्डियाक एरिद्मिया) र मुटु एक्कासी बन्द भएर मृत्यु हुने समस्या (सडन कार्डियाक डेथ) को विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । डा. रोशनले यस विषयमा क्यानाडाबाट साँढे २ वर्षको फेलोसिप लिनुभएको छ । उहाँ क्यानडाको
स्तन क्यान्सर अरु क्यान्सरहरुभन्दा बढी हुने क्यान्सर हो । यो क्यान्सर महिला र पुरुष दुवैलाई हुन सक्ने भएता पनि पुरुषमा ज्यादै कम देखिएको छ । यस क्यान्सरवाट विश्वमा सन् २००४ मा मात्र ५ लाख १९ हजार व्यतिmको
एक वर्षभन्दा कम उमेरका केटा बच्चाहरुमा पिसाबमा इन्फेक्सन देखिएमा उनीहरुमा पोस्टेरियर युरेथ्रल भाल्ब (पीयूभी) हुनसक्छ । पोस्टेरियल युरेथ्रल भाल्भ भनेको पिसाबथैलीको मुनि पिसाब आउने बाटोमा फोल्ड अर्थात भाल्बको रिंग बन्ने प्रक्रिया हो । यसबाट पिसाब फेर्दा पिसाब
पिसाबथैलीको क्यान्सरको समस्या लिएर धेरै बिरामी आउने गर्छन् । यो महिला पुरुष दुवैलाई देखिने गरेको छ । पिसाबथैलीको क्यान्सर एक किसिमको क्यान्सर हो । यसलाई युरोथेलिल क्यान्सर भनिन्छ । करिब ९० प्रतिशत यस प्रकारको क्यान्सर पिसाबथैलीको भित्री
प्रोस्टेटको शल्यक्रिया, वीर्य निस्कदैन भनेर नआत्तिनुस्
प्रा.डा. ज्ञवालीले त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालमा काम शुरु गर्नुभएको २३ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा अस्पतालको टिमले करिब १५ हजार व्यक्तिको युरोलोजीसम्बन्धि शल्यक्रिया गरिसकेको छ । यसमा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट, मिर्गाैलाको पत्थरी, प्रोस्टेट, मिर्गौलाको क्यान्सर, पिसावथैलीको क्यान्सर र जन्मजात
युरोलोजीसम्बन्धि उपचारमा प्रतिफल एकदम राम्रो छ । यसमा बिरामी चाँडै रि—कभर हुने र सफल दर ९५ प्रतिशतसम्म मिलेको छ । जस्तैः पिसाब थुनिएको समस्या लिएर आएको बिरामीको शल्यक्रिया गरेपछि ठिक हुन्छ । युरोलोजीअन्तर्गत कुनै पनि भागमा ढुङ्गाले
नेपालमा ‘लुपस’ सम्बन्धि यकिन आँकडा नभए पनि यो रोग पुरुषको तुलनामा ९ गुणा बढी महिलालाई हुने गरेको पाइएको छ । लुपस भएका लगभग ९० प्रतिशत बिरामी १५ देखि ४५ बर्षका महिला हुने, जीवनको महत्वूर्ण एवं उत्पादनशील समयमा
तपाईंको रक्तचाप कति छ ? ब्राजिलकी एक महिला मेरीयान डराइन् । विनाकारण तिनको नाकबाट भलभलती रगत बग्न थालेको थियो । ‘मैले त आफू मर्नै लागेछु भन्ठानेकी थिएँ’ भनी तिनी सम्झन्छिन् । चिकित्सकले त्यो रक्तश्राव उच्च रक्तचापले (धमनीको
मस्तिष्क क्षमता घट्दै जाने अल्जाइमर्स रोग के हो ? (सन्दर्भः बिश्व अल्जाइमर्स दिवस—२०१८)
(सन्दर्भः बिश्व अल्जाइमर्स दिवस—२०१८ ) नेपालको सन्दर्भमा अल्जाइमर्स रोगको बारेमा आम नागरिकमा जनचेतनाको स्तर न्यून छ भने सम्बन्धित जनशक्तिहरू पनि यस रोगप्रति त्यति चासो राख्दैनन् । जनचेतनाको अभावकै कारण यो रोगलाई मानसिक रोगका रुपमा बुझिदै आएको छ